Kitra lehilahy – «Lalao Olympika 2016» : hiady volamena i Brezila sy i Alemaina | NewsMada
Kitra lehilahy – «Lalao Olympika 2016» : hiady volamena i Brezila sy i Alemaina
Ny seleçao-n’i Brezila sy ny National Mannschaft no hiatrika ny famaranana amin’ny fiadiana ny medaly volamena any amin’ny lalao Olympika (JO 2016), eo amin’ny taranja baolina kitra lehilahy. Tontosa ny alarobia lasa teo ny manasa-dalana. Nosakanan’i Alemaina, ny lalan’ny Voromaherin’i Nizeria. Lavon-dry Rainiboto, tamin’ny isa 2 noho 0 ry zareo Nizerianina.
Tetsy an-kilany, nomontsanin-dry Neymar, tamin’ny isa mavesatra 6 noho 0 kosa i Honduras. Tsy niady mihitsy ny fihaonana satria dia toy ny nanaovan’ny Brezilianina fanazarantena fotsiny ry zareo Honduras. Anisan’ireo nahatafiditra ny baolina fahenina ho an’i Brezila, i Neymar, tamin’ny alalan’ny “pénalty”.
Ny alahady ho avy izao, ao amin’ny kianja Maracana no hahalalana izay hihambozona ny medaly volamena, amin’ity lalao olympika 2016 ity. Ala-vela, tamin’ny zokiny izany i Neymar amin’ity. Raha tsiahivina mantsy, resin’i Alemaina tamin’ny isa mavesatra 7 noho 1, i Brezila, nandritra ny Mondial 2014. Hiady ny medaly alimo kosa i Honduras sy i Nizeria. Fihaonana hotanterahina ny asabotsy izao.